လူတွေဘာလို့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ရွေးချယ်ရခြင်းအကြောင်းရင်း (၅)ချက်
1. Full autonomy over their own living space
Many rentaspace before buying. They dream of painting the walls, display paintings on the walls. Buying their own home gives them the opportunity and freedom to do as they please.
၁။ ကိုယ်ပိုင်နေရာဖြစ်လို့ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း
လူတော်တော်များများဟာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်မဝယ်သေးခင်မှာ ဌားနေကြရပါတယ်။ ဌားနေကြရစဉ်မှာ နံရံကို ဘာအရောင်လေးသုတ်မယ်၊ ပန်းချီကားတွေနဲ့အိမ်ကို ဘယ်လိုလေးအလှဆင်မယ်ဆိုပြီး စိတ်ကူးယဉ်တတ်ကြပါတယ်။ အိမ်ဝယ်လိုက်ရင် ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲကအိမ်ပုံစံကို စိတ်ကြိုက် ပုံဖော်နိုင် ပါတယ်။
Read more: https://bit.ly/3nvdMt4
2. Sense of privacy and freedom to live and thrive inasecured environment
People wants to live inasecured environment, inacommunity with like-minded neighbours who will eventually become their friends.
၂။ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်ခြင်း
လူတွေက အိမ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားပြီဆိုရင် စိတ်ချရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တာ၊ အိမ်နီးချင်းကောင်းရှိတာစတဲ့ အချက်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါတယ်။
3. Living inanice and well-designed home
People loves the idea of living and entertaining their friends and colleagues inawell-designed home,afunctional space they can raiseafamily and young kids. Buyinganew project construction allows them to renovate the space to accommodate their growing family.
၃။ ဒီဇိုင်းလှပြီး ခေတ်မီဆန်းသစ်တဲ့ အိမ်မှာနေခြင်း
လူတော်တော်များများက ခေတ်မီဆန်းသစ်တဲ့ ပုံစံဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်မှာ နေတာကို ကြိုက်တဲ့အပြင် သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကို အိမ်အလည်ခေါ်ပြီး သူတို့နဲ့အချိန်ဖြုန်းရတာကိုလဲ ကြိုက်ကြပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ဆဲအိမ်တွေကို ဝယ်တဲ့အခါ အိမ်အပြင်အဆင်၊ အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်တဲ့အတွက် မိသားစုအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေပါတယ်။
4. Engaging inahealthy and sustainable community
People wants to live and buy homes inacommunity and neighbourhood with rising home value. With the pandemic not going to go away anytime soon, people are looking forapandemic proof community and neighbourhood.
၄။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ လူနေမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ နေထိုင်ခြင်း
လူတွေက အိမ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်၊ အသိုင်းအဝိုင်းကောင်းရှိတဲ့နေရာ၊ အိမ်တန်ဖိုးအမြဲ တက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ နေချင်ကြပါတယ်။ အခုလိုရောဂါတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလဲ လုံခြုံစိတ်ချရ တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေဖို့ကို ရွေးချယ်ကြပါတယ်။
Read more: https://bit.ly/2MOc8X2
5. Financial freedom and legacy planning
Buyingahome allows people to achieve financial freedom earlier, giving themasecured future, the freedom to do what they want earlier in life. Once the home loans are paid, they would have real freedom to plan for their legacy.
၅။ ငွေကြေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုရှိခြင်းနှင့် အနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်စီမံနိုင်ခြင်း
အိမ်ဝယ်ယူခြင်းဟာ လူတွေကို ငွေကြေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုရှိစေတဲ့အပြင် ခိုင်မာတဲ့အနာဂတ် ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြိုတင်စီမံထားနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ရာချေးငွေယူထားလို့ အကျေဆပ်ပြီးပြီဆို နောင်လာမယ့် မျိုးဆက်အတွက် ခိုင်မာသေချာတဲ့ အနာဂတ်လဲ ဖန်တီးပြီးဖြစ်ပါတယ်။